ဝဿန်ဦး: March 2008
ဟိုစဉ်အခါ ၊ မြင်ခဲ့ရာဝယ်
မွှေးပျံ့ကြိုင်ဝင့် ၊ ဖွေးဖြူဆင့်သည့်
ညမှောင်ကောင်းကင် ၊ မျှော်ကြည့်လျှင်လည်း
မိုးမြင့်ယံထက် ၊ ပြိုးပြက်ပြက်နှင့်
လေးဘက်လေးတန် ၊ ရိုးခြံကာဆီး
ရေကန်ကြီးဝယ် ၊ လှမာန်သွယ်သည့်
အေးမြချမ်းစိမ့် ၊ တောတောင်ရိပ်ဝယ်
ရှုဖွယ်မငြီး ၊ သွင်သွင်စီးသည့်
နွမ်းကြွေရော်ရင့် ၊ ရနံ့လွင့်ပြီး
ကြယ်ပွင့်လည်းကြွေ ၊ ကြာလည်းခွေ၍
ဟိုစဉ်အခါ ၊ ထိုမျက်နှာမှာ
မေမေ့မျက်နှာ ၊ သာမြဲသာတည့်
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 7:08 PM3ယောက်ကဒီလိုတဲ့
/* ဖတ်ဖူးသမျှလေးတွေထဲက မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာသလေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချက်ပြုံးလို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်သူတွေက တစ်သက်မမုန်းသောသူများ ဖြစ်ကြပါစေ */
~ ဒီနေ့ ဆရာမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဘယ်သူမှ မဖြေနိုင်ဘူး မေမေ။
~ ဆရာက ဘာမေးလို့လဲ ?
~ ဒီထိုင်ခုံကို ဘယ်သူ ချိုးတာလဲတဲ့
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 1:48 PM0ယောက်ကဒီလိုတဲ့
တောင်ပိုင်းမြို့သို့ သွားမည့် ဖခင်အား ၊ သူ၏ဇနီး နှင့် သား လိုက်လံ ပို့ဆောင်ကြသည်။
ရထားထွက်သွားပြီး ပလက်ဖောင်းသို့ ရထားအသစ်တစ်စီး ဆိုက်ရောက်လာသည်ကို မြင်သော အခါ သားက သူ့မိခင်အား
~ ကြည့်ပါအုံးမေမေ ရထားကြီးပြန်လာတယ် ဖေဖေဘာကျန်ခဲ့ပြန်ပြီလဲ မသိဘူး
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 1:40 PM0ယောက်ကဒီလိုတဲ့
~ မေမေ သားကို ဘယ်မှာမွေးခဲ့တာလဲ ?
~ မေမေကကော ?
~ စာရာသော့ဖ်မြို့မှာ (ဗော်ဒဂါမြစ်၏ ဆိပ်ကမ်းမြို့ တစ်ခု)
~ ဖေဖေကကော ?
~ ဒါဆို သားတို့ ဘယ်လို တွေ့ပြီးရင်းနှီးခဲ့ကြတာလဲ ?
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 1:33 PM0ယောက်ကဒီလိုတဲ့
မည်း မှောင် မိုက် နေပါတယ်အမေ
/* အာရုဏ်ဦးနှယ် ၊ မြစ်တစ်စင်းသွယ် ၊ လတစ်စင်းပမာ မေတ္တာတရားကြီးမားသော ချစ်မေမေသို့ */
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 7:03 AM4ယောက်ကဒီလိုတဲ့
က ခ ဂ ဃ ၊ စာလုံးလှကို
သပ်ရပ်ခန့်ညား ၊ သိမှတ်ပွားအောင်
ကစားခုန်စား ၊ အားကစားကို
နေ့ညမနား ၊ တို့အများက
တွေးဆကြံမှု ၊ စုစုပြုကာ
ကဗျာဂီတ ၊ တေးသံလှကို
ထိုမှတပါး ၊ တို့လက်များဖြင့်
အနန္တဂိုဏ်းဝင် ၊ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်
မွေးကျေးဇူးရှင် ၊ တို့မိခင်နှင့်
ကျွေးကျေးဇူးရှင် ၊ တို့ဖခင်အား
မွေးဖွားကျွေးပြု ၊ မှုစုစုတွက်
တဖန်ပြန်လည်(လီ) ၊ ကြွေးဆပ်မည်ဟု
စိတ်ဝယ်ရည်သန် ၊ မြတ်စိတ်မှန်ဖြင့်
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 6:36 AM3ယောက်ကဒီလိုတဲ့
စောင့်မျှော်နေမည် ၊ ထိုနေ့ဆီသို့
နံနက်မိုးသောက် ၊ ရောင်နီရောက်သော်
အိမ်မိုးပေါက်ဖွင့် ၊ မျက်နှာသစ်စဉ်
စိတ်အစဉ်ဝယ် ၊ ငါ့သားငယ်၏
တစ်နေ့တစ်ခါ ၊ မျှော်လို့သာဖြင့်
ကျန်းမာစေကြောင်း ၊ မေတ္တာလောင်းကာ
ကင်းရှင်းဝေးပယ် ၊ အန္တရာယ်ဟု
ပို့သမေတ္တာ ၊ သားလိမ္မာသို့
စားသောက်ဖွယ်ရာ ၊ ပြင်ဆင်ခါဝယ်
သားမောင်လူလှ ၊ ကူနေကြနှင့်
ဖခင်ပြုရာ ၊ အိမ်မှုရာ၌
သည်းချာဖေ့သား ၊ ကူသော်ညားလည်း
ယခုမူကား ၊ တို့အပါးမှာ
ခုကားခမျာ ၊ မြေခြားရာသို့
ပညာရေးတွက် ၊ သားလှထွက်ကာ
ခေတ်မှီထွန်းကား ၊ ပညာများအား
ဆည်းဆာမတည် ၊ မှိုင်းညိုရီကာ
နေသည်ကွယ်မြုပ် ၊ ညမိုးချုပ်ရာ
အိပ်တန်းတက်ပြန် ၊ ကျေးငှက်သံလည်း
ဆူညံရာမှ ၊ ငြိမ်ဆိတ်ကြပြီး
ရက်မှလပြောင်း ၊ လနှစ်ညောင်း၍
လူလေးအိမ်ပြန် ၊ ရောက်ချိန်တန်ကို
ပညာမြတ်မို ၊ တက္ကသိုလ်မှ
ပြီးဆုံးသင်ကာ ၊ ကျောင်းပညာနှင့်
ကောင်းစွာသိရှိ ၊ လောကသိကို
ပိုက်ကာရင်ခွင် ၊ ကြောင်းကျိုးဆင်ကာ
စောင့်မျှော်နေကြ ၊ အိမ်ပေါက်ဝမှ
အိုဗျ…အဖေ ၊ အို…အမေဟု
ပြုံးရွှင်မျက်နှာ ၊ ဖြိုးပြည့်စွာဖြင့်
အားစွမ်းမာန်ပြည့် ၊ ရောက်လာဘိသော်
မိနှင့်ဖတို့ ၊ မျက်ရည်စို့၍
ပျော်ကာပြုံးရွှင် ၊ ချစ်စိတ်ဝင်ကာ
ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ၊ ပွေ့ကာဖက်မှာ
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 4:19 AM 1 ယောက်ကဒီလိုတဲ့
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 5:37 AM2ယောက်ကဒီလိုတဲ့
ပတ္တမြားမရှိ ၊ စိန်မစီပေမယ့်
ကြားဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ခေါင်းစဉ်တော့မသိဘူး။ “အိမ်ကလေး” လို့ပဲပေးလိုက်တယ်။ မိဘအိမ်နဲ့ ဝေးနေသူတွေအတွက် အမှတ်တရပေါ့
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 10:49 PM2ယောက်ကဒီလိုတဲ့
ယုယစွာ ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ ထမင်းတစ်လုပ်
ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ် စားသောက်ရတဲ့ အချိန်ကြမှပေါ့။
အမေ ချော့သိပ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်
လောကအလယ် ခရီးကြမ်းလျောက်ရတဲ့ အချိန်ကြမှပေါ့။
နွေးထွေးစွာ ပြုစုပေးခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ပုံရိပ်
ရှိခိုးကန်တော့ တောင်းပန်ပါတယ် အမေ။
ရေးသူ ၀ဿန်ဦး ဒီအချိန်မှာ 4:31 PM2ယောက်ကဒီလိုတဲ့